Ifama yaseHattie's Hill kunye neVineyard-kufutshane ne-Owensboro - I-Airbnb
Ifama yaseHattie's Hill kunye neVineyard-kufutshane ne-Owensboro
I-Victorian entle ephefumlelweyo yindlu yasefama kwifama yosapho eyimbali. Ifama ibikusapho lwethu ukusukela ngo-1838 !! Iifenitshala zibonisa umsebenzi wobugcisa wokuqala kunye nengqokelela eyodwa kubomi bethu obuphila kumazwekazi amane. UJim kunye nam sihlala kwindawo engasemva yendlu. Ndizakubulisa xa ufika kwaye ndiqinisekise ukuba uzinzile !! .Indlu yethu inokwamkela amaqela amakhulu - kodwa ngokwemigaqo ka-Airbnb ziindwendwe ezihlawulwayo kuphela ezivumelekileyo ukuhlala. Ukuba uza neendwendwe ezingabhukhwanga ungajikiswa.
Iifenitshala zibonisa iminyaka yobomi behlabathi. Amagumbi okulala amane kumgangatho wesibini anehombisi enemixholo kunye neeqhiya ezenziwe ngezandla.
1. Igumbi lokulala leFar East elinebhedi enkulu kunye nebhafu ekufutshane.
2. Igumbi lokulala laseThai (elincinci) elineebhedi ezi-2 zokwabelana ngebhafu kunye negumbi lokulala eliseMpuma Ekude.
3. Igumbi lokulala laseNew Zealand elinebhedi yenkosi kunye nebhafu kajack kunye nejill ekwabelwanayo ngayo.
4. Igumbi elikuMbindi Mpuma elinebhedi yenkosi & nebhafu kajack & nejill ekwabelwana ngayo.
Iimpahla zilungiselelwe amagumbi okulala amathathu aphambili.
(Iipakethi ezi-2 kunye nemidlalo ekhoyo xa uyicelile.)
Igumbi le-Bunk likwicala eli-OPPOSITE lendlu ukusuka kumagumbi okulala "abadala" ... iibhedi ezi-3 kunye nebhedi yosuku olunye; Ibhedi e-1 yamawele.....izinto zokudlala kunye neTV/VCR ikwakweli gumbi ......
IZInyuko ... kufuneka ubukele abantwana abancinci !! Akukho lift yamagumbi okulala!
Igumbi lokuhlanganisana elikumgangatho wesibini linescreen esisicaba seTV enothungelwano oluthe ngqo kunye nefuton enokusetyenziselwa enye ibhedi.
Igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela libonisa indawo yokutyela ye-10 (ungacinezela i-12 ngaphakathi) kunye nepiyano e-Baby Grand.
Igumbi lesibini losapho kumgangatho wokuqala livulekele ikhitshi kunye nephuli enkulu yangaphakathi yamaxesha onyaka. Iitawuli zephuli zibonelelwa.
Ibhafu ivula kwindawo yedama/yepatio enegrisi yegesi ekhoyo ukuze uyisebenzise.
Iindawo ezininzi zokuphumla ngaphandle (Zonke INDAWO ZANGAPHANDLE ZABELWANE NOMBUSI KWAYE KUNYE NEZIQHELEKILEYO) kubandakanya ichibi, ipatio, i-gazebo, indlela enyuka induli ukuya kwisidiliya apho umgodi womlilo kunye nezihlalo zikulindile. Uhambo oluzikhokeleyo kwisidiliya nakwigadi luyolo!
Sihlala kwifama yeehektare ezingama-35 ebikusapho lukaSusan ukusukela ngo-1838. Simalunga nemizuzu engama-20 empuma yedolophu yase-Owensboro kunye nemizuzu eli-14 ukusuka kwiSibhedlele sase-Owensboro. Amachibi amabini akufuphi ekulobeni (iphepha-mvume liyafuneka). Imizuzu engamashumi amabini anesihlanu ukuya kumashumi amathathu ukusuka kwiHolide yehlabathi! Uluhlu lweendawo zokutyela ozithandayo kunye neendawo zokundwendwela ziya kulungela xa ufika.
Likhaya lethu eli, sihlala apha kwelinye iphiko lendlu. Siyakonwabela ukwazi iindwendwe zethu, kodwa siya kukunika imfihlo ukuba uyafuna. Sinomntu ophekayo walapha ukuba ungathanda ukufumana ukutya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Maceo